Ny mpivarotra amoron-dalana tsy manaiky, ny kaominina tsy milefitra … : gidragidra lava etsy Analakely (NewsMada) | AEMW
Ny mpivarotra amoron-dalana tsy manaiky, ny kaominina tsy milefitra … : gidragidra lava etsy Analakely (NewsMada)
Asa, fanimpiriny izay! Nirohotra nidina an-dalambe, nanao fihetsiketsehana nanoloana ny lapan’ny Tanàna indray, omaly, ireo mpivarotra amoron-dalana. Nilaza ny tsy hilefitra ny kaominina ary manohy hatrany ny fanadiovana ny tsena, amin’ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalàna. Ireto farany, ankilany, tsy manaiky fa mitsipaka ny fandaminana. Gidragidra lava !
Raikitra indray ny fidinana an-dalambe nataon’ny mpivarotra amoron-dalana omaly atoandro. Nifampitarika, ary efa niomana ireo mpivarotra ireo ary nilahatra sy nitabataba teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna, tokony ho tamin’ny 11 ora teo. “Avereno ny entanay, miala ny ben’ny tanàna…”, ny tabataba nataon’ireo mpivarotra teny an-toerana. Voatery nidina teny an-toerana ny Emmo/Reg tamin’ny fiarovana ny lapa sy fandaminana ireo olona tsy hihoa-pefy.
Araka ny filazan’ireo mpivarotra amoron-dalana, noho ny entan’izy ireo alain’ny kaominina ny anton’izao hetsika izao. Nambaran’izy ireo fa miharo herisetra sy fandrobana no ataon’ireo mpiasan’ny kaominina sy ny polisy kaominaly amin’ireo olona ireo. Eo ihany koa ny filazana fa tsy misy vahaolana akory amin’ny fanalana azy ireo eny an-toerana, kanefa nisy ny fampanantenana tamin’izany. “Ny fakana volana tapakila isaky ny mpivarotra, manampy trotraka ny tsy fisian’ny vahaolana nolazaina”, hoy izy ireo. Ireo rehetra ireo, anisan’ny nahatonga ireto mpivarotra amoron-dalana ireto nitroatra.
Nandrangitra ireo mpitandro filaminana narahin’ny vavabe nataon’ireo mpivarotra nandritra io antoandro tontolo io. Ireo Emmo/Reg kosa tsy niala teny an-toerana mihitsy mandram-pilamin’ireo mpivarotra amoron-dalana. Ireo mpivarotra lehibe kosa, tapitra nanidy tsena avokoa nanoloana ny hetsik’ireo olona ireo. Nandeha rahateo ny resaka fa mety hisy indray ny mpanararaotra handroba amin’izao hetsika izao. Efa samy mailomailo avokoa ny rehetra. Niverina tamin’ny laoniny ny filaminana eny an-toerana, ary niverina nivarotra indray ireo mpivarotra ny hariva.
Tsy hihemotra ny kaominina
Efa nilaza ombieny ombieny ny kaominina Antananarivo Renivohitra fa tsy mihemotra amin’ny asa fanadiovana ny tanàna ataony satria misy koa ny mponina mitaky izany fanadiovana izany rehefa voahelingelina ny fahalalahany.
Anisan’izany ny mpandeha an-tongotra, mpivarotra ara-dalàna sy mandoha hetra, ny mpamily fiara sy ny mpampiasa arabe, sns…
Manaitra ny sain’ny mpiantsena amoron-dalana ny kaominina hiditra any anaty tsena rehefa hividy zavatra fa tsy hanome fahazaran-dratsy ireo mpivarotra tsy ara-dalàna. Misy ny tsena an-dalambe toy ny eny Mahamasina rehefa alakamisy, Ambodin’Isorty rehefa asabotsy, Andravoahangy rehefa alarobia fa matoa ireo mpivarotra ireo misisika mivarotra eto Analakely, misy manjifa ny entany ka lasa mahatamana azy ny tsy fanarahan-dalàna. Manana toerana azo hivarotana ho an’izay manara-dalàna ny CUA ka manainga ny mponina hahatsapa ny ezaka atao eto ho an’ny tombontsoan’ny besinimaro.
Yves S. sy Tatiana
← Et si ce code était codé… (NewsMada)
« … Tany sarobidy, masina tokoa ! » (NewsMada) →